Ogolow in ilmo galeenka lagaa soo saaro qaadona baabuur &(Mashruuc ka socda India) – SBC
Ogolow in ilmo galeenka lagaa soo saaro qaadona baabuur &(Mashruuc ka socda India)
Dalka Hindiya waxaa la filayaa in sanadka 2030-ka uu tiro dad badnimada aduunka kala wareego wadanka Shiinaha, waxaana la sheegay in kororka dadka wadanka Hindiya uu marayo haatan meel aad u sareysa oo uu ku socdo xawli.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Rajasthan ayaa qaaday olole balaaran oo aan horey aduunka looga maqal loogana arag kaasi oo looga hortago dhalmada faraha badan ee haweenka waxaana la soo rogey mashruuc lagu dhimayo dhimayada sare u kaca dadka ee deegaankaasi.
Saraakiishu waxay ku dhiirigalinayaan haweenka & ragga inay si mutadawacnimo ah isugu raacaan in haweenka laga saaro xubinta ilmo galeenka ee uurka ka aasaasmo, isla markaana ragga qudhooda lagu sameeyo farsamooyin hoos u dhigaya in minada (Sperm-da) ragga laga dilo ugxanta ilmuhu ka abuurmaan & walia qaliin lagu sameynayo xidida minadda xambaara waxaana taasi badalkeedii qoyskii go’aankaasi qaata la siinaya baabuur & waliba abaalmarino kale oo qaali ah.
Abaalmarinta waxaa ugu qaabilsan in qoyska la siinayo baabuurka ay Hindiya sameyso ee lagu magacaabao Tata Nano oo ah gaariga aduunka ugu raqiisan, kaasi oo ku kacaya qiimo gaaraya
Ragga & dumarka talaabadan ku dhaqaaqa waxaa ka mid ah abaalmarinta la siinayo Telefishino, Mobile, Qaboojiyeyaal & waliba hadiyo kale, waxaana ay gali doonaan bakhtiyaanasiib bilaaban doona 1-da bisha September.
Baabuurka loo balanqaaday in la siinayo ee lagu magacaaboi Tato Nano waa gaariga aduunka ugu raqiisan waxaana farsameysay shirkada TATA oo Hindiya sanooyin ka hor la wareegtey, iyadoo qiimaha gaarigaasi uu gaarayo 2500 (Laba kun & Boqol)- 3,000 (Sadex kun) oo doolarka Mareykanka.
Madax caafimaadka ee magaalada Jhunjunu kana tirsan gobolka Rajasthan ee galbeedka Hindiya ninka lagu magacaabo Sitaram Sharma wuxuu sheegay In fursadan ay ka faa’ideysan doonaan dad gaara 20 kun oo qof, isagoo sheegay in uu u furan yahay dhamaan dadka wadanka Hindiya balse aanu ku koobneyn gobolkiisa.